Yiziphi izifundo empilweni? - Mytika Speak
Ikhaya / Izifundo Ekuphileni / Yiziphi izifundo empilweni?
Izifundo empilweni ukuzivocavoca komphefumulo wakho.
Lapho isifundo sivela, uvame ukufakwa esimweni esingakhululekile. Lokhu kudinga umphefumulo wakho ukuphuma phambi kwe uhlamvu ukunqoba isifundo. Lapho isifundo sesiqedile, umphefumulo wakho ubuyela emuva ngemuva komlingiswa wakho. Uma usiphasa isifundo, umphefumulo wakho uyaqina. Uma uhluleka esifundweni, sizophinda.
Isibonelo, uJacque wesaba izicabucabu. Uhlala efakwa ezimeni lapho ehlangana khona nezicabucabu futhi acasuke. Uba namaphupho amabi ngabo. Ngelinye ilanga, lapho ethola isicabucabu ekhawunteni yasekhishini, uzizwa egcwala isifiso sokuqeda inkinga. UJacque, ekhombisa isibindi esingenacharacteristic, welula isandla sakhe esicabucabu esihamba kuso ngobumnene. Ube esekhipha isicabucabu ngaphandle asidedele siye otshanini. Ngemuva kokubona ukuthi akukho okubi okwenzekile, ukwesaba kukaJacque ngezicabucabu kuncipha kakhulu.
Ngemuva kokuphasa isifundo, kujwayelekile ukuzwa abantu bekhuluma izinto ezinjengokuthi, “Angazi ukuthi ngawathathaphi amandla okukuqeda lokho!” Ukuphasa isifundo kungabonakala njengokuthola ibheji lenhlonipho. Abanye abantu bayilutha futhi bafune izifundo abazonqoba. Abanye bangazesaba izifundo futhi bakhethe ukuzigwema. Lokhu kungabenza baphinde bazalwe izikhathi eziningi baze babhekane nezifundo zabo baziphase.
Uma uphasa isifundo, umphefumulo wakho awusadingi ukuzwa isifundo njengoba sesivele sinesixazululo. Kanjalo, izifundo zibaluleke kakhulu ekuthuthukisweni komphefumulo.
Inhliziyo ephukile iyakhala
Ukuthembana kudabukile ngemuva kwamanga
Kunzima ukugwinya okubi
Kunzima ukuphefumula lapho uhlanya
uma uhamba nokugeleza
Amathegiukuqonda umzimba Ugqozi izifundo izifundo empilweni izinkondlo ingokomoya